Dịkwa ka usoro ha ga-esi ebute ọrịa na-efe efe | Network Meteorology
Foto - mmbio
Nke a kwuru site n'aka onye na-ahụ maka ọgwụ mgbochi nke North America Arturo Casadevall, onye sonyere na mmeghe nke 21st International Symposium nke Astacalogy emere na Royal Botanical Garden nke Madrid. Fungi bụ microorganisms nke okpomọkụ dị elu na-akwado, yabụ na mgbanwe ndị na-eme na ihu igwe, a ga-atụ anya na ọnụ ọgụgụ ya na-amụba ngwa ngwa.
N'ime ime nke a, dịka ọkachamara ahụ si kwuo, ga-ebute ọrịa na-efe efe nke ahụ ga-emetụta anyị, ebe ọ bụ na mgbakwunye, ọ gbakwụnyere, ọ na-esiri ike ịchọta ọgwụ mgbochi nwere ike ịlụ ọgụ ma kpochapụ ha.
Arturo Casadevall, Prọfesọ nke Microbiology na Immunology na Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health na Baltimore, na United States, anọwo na-amụ banyere ọrịa na-efe efe kemgbe ọtụtụ iri afọ. Ihe dịka afọ 20 gara aga ọ malitere nyocha iji mụọ ma ghọta nje virus nke AIDS. Kpọmkwem, ọ nwere mmasị na ya fungal pathogenesis, ka usoro nje ji arụ ọrụ na, karịa ihe niile, gịnị bụ usoro arụ ọrụ ero ahụ Neoformans nke Cryptococcus.
Dị ka ya si kwuo, n'oge na-adịghị anya n'ọdịnihu, anyị ga-ebu agha megide ero. A agha nke na-amaghị onye ga-emeri ya, ebe ọ bụ na ndị a microorganisms »ha agaghị ala n'iyi ma ọlị», N'ihi na n'otu oge ahụ ụfọdụ na-apụ n'anya, ndị ọzọ na-apụta na / ma ọ bụ otu ihe mana ka ike.
Na nke a, a ghaghi igbakwunye na umu mmadu na-ebibi ebe obibi ebe umu anumanu na osisi bi. N'ime ime nke a, "microbes iputa na virulence na nwere ike ime ka ọrịa na-efe ozugbo n'ihi na mmekọrịta ndị mmadụ na osisi na ụmụ anụmanụ», Ọkachamara ahụ dọrọ aka ná ntị.
Casadevall kọwara dị ka ihe ọmụmụ dị mkpa nke a na-eme ma na Royal Botanical Garden na ebe ndị ọzọ. Ma ọ bụ na ọrịa na-efe efe na invasive osisi nwere ezigbo mmekọrịta. Ma obughi nani nke ahu, mana onye obula n’ime anyi nwere mmekorita, ya mere odi nkpa ka omumu mgbanwe nke n’eme ka ihe ghara idi nma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Mgbanwe ihu igwe » Fungi ga - ebute oria na - efe efe n'ihi okpomoku uwa